यस्ता व्यक्तिको यौनजीवन सधै सुखमय हुन्छ ? जान्नुहोस ५ तथ्य ! Arthadaily: Search for truth and fact.
यस्ता व्यक्तिको यौनजीवन सधै सुखमय हुन्छ ? जान्नुहोस ५ तथ्य !
प्रकाशित: २०७६-४-२५ गते
के तपाइलाई थाहा छ यौनसुख सबैले समान रुपमा भोग गरिरहेका हुँदैनन् भन्ने कुरा । हो जीवनमा कतिपयको यौन जीवन दुखदायी हुन्छ, त कसै-कसैको रोमाञ्चक पनि । तर कसैले यसबाट चरम सन्तुष्ट प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, कसैले असन्तुष्ट पनि त्यति नै । हाम्रो समाजमा यौनसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरु रहेका छन् । यौनजन्य समस्याले नै विकृत रुप लिने हो । कतिपयले भन्छन्, - मैलें सोचेजस्तो यौन सन्तुष्ट पाइरहेको छैन । कतिपय गुनासो गर्छन्, मेरो पार्टनरले साथ दिएन । कतिपय जिज्ञासा राख्छन्, किन मेरो सिघ्र स्खलन भएको हो ? यो त समग्र मात्र हो । प्रत्येक व्यक्तिको इच्छा र चाहाना फरक-फरक हुन्छ ।
यौनको बारेमा यावत् जिज्ञासा सदियौंदेखि उठ्दै आइरहेका थिए । यौनलाई कसरी सुखमय बनाउने भनेर नयाँ नयाँ विधीहरुको खोज एवं प्रयोग पनि भइरहेको छ । यद्यपी यसमा थुप्रै कमीकमजोरी समेत देखिदै आएका छन् ।
कतिले आफ्नो यौनाङ्गको आकार, प्रकारलाई लिएर प्रश्न उठाउने गर्छन् । कतिले शारीरिक कुरालाई पनि यसमा जोड्ने गरेका छन् । यौन शारीरिक क्रिया जरुर हो । तर, यसमा शारीरिक उपस्थिती मात्र पर्याप्त छैन । यौनमा शारीरिक उपस्थिती जति आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी मानसिक उपस्थिती आवश्यक छ ।
जुन जोडि एकसाथ खुसी हुन्छन् र आफ्नो यौन जीवनसँग सन्तुष्ट हुन्छन् । उनीहरुमा आफ्नो फरकफरक रुची हुन्छन् । उनीहरु जब साथमा हुन्छन् त्यतिखेर एकआपसमा समय बिताउँदा खुसी हुन्छन । तर, जब अलग अलग हुन्छन् त्यतिखेर पनि उनीहरु आ(आफ्नो रुचीहरुलाई पुरा गर्न चाख राख्छन् ।
जुन मानिसहरु आफ्नो यौन जीवनसँग खुसी रहन्छन् भने उनीहरुमा केही यस्ता विशेष बानी हुन्छन् । ती बानीहरुले उनीहरुलाई आफ्नो पार्टनरसँग सन्तुष्ट मात्रै बनाउँदैन उनीहरुलाई सुखी यौन जीवन राख्नको लागि प्रेरित गर्छ । यी बानीहरुलाई अपनाएर तपाईं पनि आफ्नो यौन जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ ।
ओठबाट पत्ता लगाउनुहोस् महिलाको यौन व्यवहार
के तपाई घरिघरि कोल्टे फेरेर सुत्नुहुन्छ ? यसको फाइदा जान्नुहोस् !
११ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, अभियुक्त सार्वजनिक गरिँदै
देशमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलिरहेको छः कमल थापा
प्रतिनिधीसभाको बैठक बस्दै, सांसदको प्रश्नमा ४ मन्त्रीले जवाफ दिने
बाजुरामा फेरि हिमपात, उत्तरी क्षेत्रबाट मार्तडी पुग्ने यातायात अवरुद्ध